ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပါ … ဦးဆာမိရယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပါ … ဦးဆာမိရယ်…
ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပါ … ဦးဆာမိရယ်…
Posted by alinsett on Nov 15, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, My Dear Diary, Poetry | 21 comments
ရူးသွပ်ခြင်း အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ… ဦးဆာရေ . . .။
အနုပညာနဲ့ ပက်သက်လာရင် ခံစားချက်ပြင်းထန်တတ်တဲ့ ဦးဆာကိုမှ တိုင်တည်ပြီး
အနုပညာအကြောင်းနည်းနည်း ပြောချင်လာလို့ပါ ။
အနုပညာအကြောင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောနေကျ ကျွန်တော်
အခု အနုပညာနဲ့ ပက်သက်ရာ ပက်သက်ကြောင်းလေး ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ ။
ဦးဆာကို တိုင်တည်ပြီး ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတွေ ရင်ဖွင့်ပြတယ်ပေါ့ဗျာ ။
အနုပညာ ဖန်တီးမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်ထဲ မတင်မကျဖြစ်နေတာတစ်ခု ရှိတယ်။
မတင်လည်း မတင် မကျလည်း မကျဘူးဆိုတော့ နင်နေတာ / တစ်နေတာကြီးပေါ့ဗျာ ။
အဲဒါကတော့. . . .
ကျွန်တော်တို့အနုပညာ ဖန်တီးရာမှာ
(ဒီနေရာမှာ စာပေအနုပညာ/ကဗျာ/ဝတ္ထုကိုပဲ ဦးတည်ပြောပါမယ်)
ဘာသာစကား / အက္ခရာ / ဗျည်းသရ တွန့်တွန့်ကောက်ကောက်တွေကို မသုံးမဖြစ် သုံးရပါတယ် ။
အနုပညာပစ္စည်းနဲ့ အနုပညာဖန်တီးသူ ကြားက အနုပညာ ခံစားမှုအတွက် ဖော်ဆောင်ပြထားတဲ့ ဘာသာစကား/အက္ခရာတွေက ကြားခံပစ္စည်းပါ ။
ကဗျာတစ်ပုဒ် ဆိုတာကို အကြမ်းထည်ကြည့်လိုက်ရင် စကားလုံးတွေ (ဘာသာစကား/အက္ခရာ) ကိုသာ မြင်ရပါတယ် ။
အဲဒီ ဘာသာစကားကို ဖတ်တဲ့သူက ဖတ်ပြီးမှ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ပြီး ခံစားပါတယ် ။
ရသမြောက်ခြင်းဆီကို သွားဖို့ ရာ …ဘာသာစကား အက္ခရာတွေက ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် မပါမဖြစ် ပါနေရပါတယ် ။
ကဗျာကို ကဗျာအဖြစ်ပြသဖို့အဲဒီ အက္ခရာတွေကို မသုံးမဖြစ် သုံးနေရပါတယ် ။
အနုပညာဖန်တီးသူက သူ ခံစားရတဲ့ အတွေး / ခံစားချက် /အယူအဆကို လှစ်ဟ ပြသပြီး အနုပညာပစ္စည်းအဖြစ် ဖန်တီးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ . . .
ဘာသာစကားက အဓိက ကျတဲ့နေရာက ရှိနေပါတယ် ။ ဒါကို ဦးဆာတို့ သိပြီးသားပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ထပ်စဉ်းစားရမှာတွေ ရှိနေပါတယ် ။
အဲဒီလောက် အရေးပါ အဓိက ကျနေတဲ့ ဘာသာစကား ( ကျွန်တော်တို့ ဘာသာစကား ) ဟာ. . . ဘယ်လောက်တိကျ သေချာသလဲ။
ဆိုလိုတာက . . .
ကျွန်တော်တို့ ခံစားချက်ကို စာသားတွေနဲ့ ဖော်ထုတ်ပြသရင် ခံစားချက်ကို ပီပီပြင်ပြင် ပြသနိုင်ဖို့ ရာ တိတိကျကျ အသုံးပြုလို့ ရသလား ပေါ့ ။
ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားမှာ က …..
မရှင်းမရှင်းတွေ အများကြီးမှ အများကြီးပါ။
အဲဒီ မရှင်းမရှင်းတွေ အကြောင်းထိုင်ပြောနေရင်ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
တိုတိုပြတ်ပြတ်ပြောရရင်. . . ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘာသာစကားဟာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တိုင်းကို
တိတိကျကျ မပြသ မဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ။
ဝေဝေဝါးဝါး ထင်ယောင်ထင်မှား တွေ ဖြစိနေတဲ့ စကားလုံးတွေ / မပြည့်စုံ မလုံခြုံတဲ့ စကားလုံးတွေ / ဆိုလိုချက် သွေဖည်တိမ်းစောင်းနေတဲ့စကားလုံးတွေ
အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ ထွက်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ …. အဲဒီလို အရောရောအထွေးထွေး ဖြစ်နေပါတယ် ။ဥပမာ — မင်္ဂလာဆောင်သွားမယ် ဆိုတဲ့ ဝါကျကို ကြည့်ပါ ။
ဝါကျတစ်ကြောင်းလုံး ကို ခြုံကြည့်ရင်…. အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုတော့ ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သေချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်မင်္ဂလာဆောင် သွားမယ်
၁ ။ ။ မင်္ဂလာဆောင် ပွဲတစ်ခုကို သွားမယ်လို့ပြောတာလားးး ( အနာဂတ်လား..)
၂။ ။ မင်္ဂလာ ဆောင်သွားမယ် ။ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပသွားမယ် ( အတိတ်လား .. )
၃။ ။ မင်္ဂလာဆိုတာကြီးကို ဆောင်ယူသွားမယ် ယူဆောင်သွားမယ်. . .လို့ ပြောတာလားး ( ပစ္စုပ္ပန် လား..)
နောက်. . . .
အား ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို မြင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ။
နာကျင်လို့ အော်လိုက်တဲ့အား လား
အားအင် ဆိုတဲ့ အား လား
အံ့သြတကြီး လွှတ်ခနဲအော်လိုက်တဲ့ အား လား
ကျီးကန်းတစ်ကောင်ရဲ့အော်သံ အား လား
အားလပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အား လား
မေးစရာတွေ အများကြီး ထွက်လာပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ဝေဝါးပြီး ဆိုလိုရာကို လွယ်လွယ် မပြနိုင်တဲ့ သဘောတွေ ရှိပါတယ် ။
ဂါတ်ရှေ့ မှာ ဈေးရောင်းတဲ့ မြန်မာဈေးသည်ကို မေးပါတယ် ။မောင်မင်း လူကလေး ဘာရောင်းသလဲပေါ့လေ
ဈေးသည်က ပြန်ဖြေတယ် ။
တိုလီမှုတ်စလေးတွေ ရောင်းပါတယ် တဲ့
တိုလီမှုတ်စ ဆိုတာ ဘာလဲမောင်မင်း
တိုလီမှုတ်စ ဆိုတာ စုံစီနဖာ ပါ
စုံစီနဖါ ဆိုတာ ဘာလဲ မောင်မင်း
စုံစီနဖါဆိုတာ တိုလီမိုလီ ပါ
တိုလီမိုလီဆိုတာ ဗြုတ်စဖျင်းတောင်း ပါ
အဲဒီလို အဲဒီလို . . . .
ကွေ့ဝိုက်ပြီး လိုရင်းကို တော်တော်နဲ့မရောက်တတ်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာတွေ လူလားမြောက်ခဲ့ရပါတယ် ။ကဗျာဟာ ကဗျာပီသဖို့ ဒီလို စည်းမျဉ်းတွေ ရှိရမယ် / ဟိုလို ဘောင်ထဲကရေးရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပွေ့ ပိုက်ပြီး
အနုပညာသမားဟာ ကဗျာကို အားရပါးရ မရေးခဲ့ရဘူး ။ကိုယ်ပြောပြချင်တဲ့ခံစားချက်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ခါ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြလို့မရတဲ့ အနေအထားနဲ့ . . .
ကိုယ့်ခံစားမှု အာရုံ အချင်းအရာတွေက…. ဘာသာစကားနယ်ပယ်ကို ကျော်လွန်လို့ . . ဘာသာစကားနဲ့ဖော်ဆောင်ပြနိုင်ခြင်းမှာ မစွမ်းသာခဲ့ဘူး။အဲဒီလို အခါမျိုးတွေမှာ…………………
ကဗျာရေးရင်းနဲ့ဟောဒီ မပြည့်စုံ မလုံခြုံတဲ့ ဘာသာစကားကို အားမရစိတ်တွေ မကျေနပ်စိတ်တွေနဲ့ 
ကဗျာကို ကဗျာ လို မရေးပဲ ရင်ထဲမှာပဲတွေးးး
စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကဗျာရေးမိတယ် ။စိတ်ကူးနဲ့ ကဗျာရေးရတာလည်း အားမရပါဘူး ဦးဆာရေ ။
—————————————————————–အနုပညာဖန်တီးသူ ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အနုပညာပစ္စည်းလေးကို ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ရှေ့ချပြချင်သေးတာကိုးး။
ကောင်းဆိုး ဝေဖန်စကားလေးတွေ ကြားချင်သေးတာကိုးး ။ဒီတော့ ဘာသာစကားကို အားမရတဲ့ အနုပညာသမားဟာ ………….
အဲဒီဘာသာစကားကို သုံးပြီး ကဗျာမရေးတော့ဘူး ။ကျွန်တော့်မှာ . . . .
ဘာသာစကား နဲ့ မဟုတ်ပဲ တခြားအရာတွေ နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ကဗျာတွေ ရှိလာတယ် ။အဲဒီ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေဟာ ဘာသာစကားကို စွန့် ပယ်ထားလို့ 
ကဗျာမဟုတ်ဘူး လို့ စွပ်စွဲချင် စွပ်စွဲ ကြလိမ့်မယ် ။သေချာတာတော့ ကဗျာအတွေး…… တဒင်္ဂ ဖြစ်တည်ဆဲခဏလေးကို အမိအရဖမ်းပြီး ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အနုပညာ သရုပ်ဖော်မှုပါ။
အသုံးပြု /ကြားခံပစ္စည်း ကို သွေဖည်သုံးစွဲ ဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အနုပညာတိုက်ပွဲခေါ်သံတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ကျွန်တော်တောင်
မစို့မပို့ ရေးပြခဲ့ဖူးပါသေးတယ် ။
ဆရာကြီး MERCAL DUCHAMP ( 1887 – 1968 ) ရဲ့FOUNTAIN အမည်ရှိ… ကျင်ငယ်စွန့်တဲ့ ကြွေခွက်ကြီး အကြောင်းး ။
ဆရာကြီး MERCAL DUCHAMP ( 1887 – 1968 ) ရဲ့FOUNTAIN အမည်ရှိ… / ကျင်ငယ်စွန့်တဲ့ ကြွေခွက် ဟာ..စိတ်ကူးအဓိက အနုပညာ ၀ါဒ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ …
လုံလောက်တဲ့အပြင်းထန်ဆုံး တွန်းအား တစ်ခုပါ ။
စိတ်ကုး အဓိက အနုပညာ ၀ါဒကြီး.ပေါ်ပေါက်လာပြီး.နောက်ပိုင်းမှာ….
အနုပညာ ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု ဟာ..ကစဥ့်ကလျား…ဖြစ်သွားတယ်..လို့ …ထင်မိပါတယ် .။
DUCHAMP..ရဲ့ … အယူအဆ အရ ဆိုရင်…
ဘယ်အရာ / ဘယ် ပစ္စည်းကို မဆို… အနုပညာ ပစ္စည်းလို့ .. သတ်မှတ်လို့ ရနေပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင် မဖန်တီးလည်း …ရတယ် ။ ကိုယ်တိုင် မဖန်တီးသည် ဖြစ်စေ… ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသည် ဖြစ်စေ…. ( ရှိပြီးသား..အရာ / ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို )
လည်း… အနုပညာ ပစ္စည်းအဖြစ်… ချ..ပြလို့ ရနေတယ် ။
ဒီတော့… ဘယ်သူမဆို အနုပညာ သမား… ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
အနုပညာဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ မခံစားတတ်တဲ့/ အနုပညာ အကြောင်း..ကို.. ဖဲချပ်တစ်ချပ်လောက်မှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့ သူ..ကလည်း.
တွေ့ ရာ ပစ္စည်း တစ်ခုခု ကို ကောက်ကိုင်ပြပြီး.. ” ဒါ..အနုပညာ ပဲ..’
လို့ ပြောလာရင်…အနုပညာတိုင် ပတ် သွားမှာပေါ့နော် ။.
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော…. ကျင်ငယ် စွန့်တဲ့ ကြွေ ခွက်ကြီးကို…
အနုပညာ ပစ္စည်းတစ်ခု အဖြစ်….. တင်ပြ သွားလေရဲ့ …။
စိတ်ကူ အဓိက အနုပညာ သမား ( CONCEPTUAL ARTIST ) တွေ့ ရဲ့ … ယုံကြည်ချက်နဲ့ ..
အတွေးအခေါ်…..ယူဆ ချက်တွေက်ိုတော့.. လေးလေးစားစား…နာယူ မှတ်သားခဲ့ပါတယ် ။
အနုပညာ ဖန်တီးရာ မှာ….
စိတ်ကူးသာ အဓိက ပဲ…. ဆိုတဲ့အချက်က… စည်းတွေ… / ဘောင်တွေ../ ခွင်…တွေ..ရဲ့တားမြစ်ချက် တော်တော်များများကို…
ရိုက်ချိုး..ဖောက်ထွက် ရဲ..လှပါတယ် ။
( သတ္တိ လို့ ခေါ်ရမလား….မိုက်ရူးရဲတယ်လို့ ..ဆိုရမလား.တော့မဝေဖန်တတ်တော့ပါဘူး )
If someone says it ‘ s Art .
It ” s Art .
ဆီုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုလည်း… Don Judd ဆိုသူတစ်ဥိးက.. ၀င်ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ် ။
CONCEPTUAL ART က စာပေ အနုပညာ ../ မြန်မာ့ စာပေအနုပညာလောကမှာ….. ထဲထဲဝင်ဝင်..
မထိုးဖောက်နိုင်သေးဘူး.လို့ မြင်မိပါတယ် ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာတော့… 1960 နောက်ပိုင်း…မှာ… ထွန်းကား ခဲ့တယ်…လို့ ..မှတ်ဖူး../ ဖတ်ဖူးခဲ့ပါရဲ့။
CONCEPTUAL ARTIST တွေ..ရဲ့ … အလိုအရ ဆိုရင်…
အနုပညာ တစ်ရပ် ဖန်တီး.ရာမှာ…အခြား…ဘာ မှ မလိုပါဘူး..တဲ့ ။
စိတ်ကုးလေး တစ်ခု သာ..အဓိက…တဲ့။
၀တ္ထု တစ်ပုဒ် ဖန်တီးတော့မယ်…ဆိုပါတော့..။
၀တ္ထု ဆိုတဲ့ .. စာပေ အနုပညာကို ဖန်တီးရာမှာ….
၀တ္ထုရေးခြင်း အတတ်ပညာ/ ဇာတ်လမ်း../ စကားလုံး../ ( ဘာသာစကား က အဓိက ပေါ့လေ.)
ပြီးတော့….အစီအစဉ်ကျန စွာ..ကြောင်းကျိုး.ညီညွတ်မှုတွေ..နဲ့အနုပညာသမား ရဲ့ပါရမီ..ဆိုတာတွေလည်း.လိုပါသေးတယ် ။
ဒီအချက်တွေနဲ့ ရေးတာ ဟာ…
သရုပ်မှန် ၀ါဒ ( Realism ) အရ… သမားရိုးကျ ရေးတာပါ ။
စိတ်ကုး အဓိက အနုပညာ သမားတစ်ယောက်….
၀တ္ထူ တစ်ပုဒ် ဖန်တီးတော့မယ်..ဆိုရင်…(( ၀တ္ထုရေးခြင်း အတတ်ပညာ/ ဇာတ်လမ်း../ စကားလုံး../ ( ဘာသာစကား က အဓိက ပေါ့လေ.)
အစီအစဉ်ကျန စွာ..ကြောင်းကျိုး.ညီညွတ်မှုတွေ..နဲ့အနုပညာသမား ရဲ့ပါရမီ…..))
အဲဒါတွေ.. ဘာမှ မလိုတော့ပါဘူး..တဲ့။
ဓါတ်မီးတစ်လက်ကို… နာမည် တစ်ခု.. တပ်…/ လတ်မှတ်ထိုးပြီး… ” ဒါ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်ပဲ..” လို့ ပြောပါလိမ့်မယ် ။
” ဒါ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ပါ…” လို့ ..ဆိုပါလိမ့် မယ် ။
( ဥပမာ..ပြောတာပါ )
ရသလား…. / အဲသလို ရသလား….
သူတို့အလို အရ ဆိုရင်တော့..ရပါတယ် ..တဲ့ ။
ဒါတွေ က ဥပမာ စကားတွေ ပါနော် ။
မြန်မာ့ အနုပညာလောက ထဲမှာတော့….
ဒါမျိုး.ဖော်ပြချက်တွေ.. မတွေ့ ရသလောက်ပါပဲ..။
ငယ်ချစ်နာမည် မနှင်းဆီ…ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတို ( ၀ါနီပြာ မဂ္ဂဇင်း ထင်ပါတယ် ။ မဂ္ဂဇင်းအမှတ်နဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ နှစ်..ကို မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။)
အဲဒီ ၀တ္ထုတို ကတော့….
ဘာ စာသားတစ်ခုမှ မပါပဲ…
အ၀ါရောင် ဖဲကြိုး….တစ်စ ကို.. စာရွက်မှာ. ကပ် ပေးထားရုံ….လေး..တင်ပြခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဒီ ၀တ္ထု ကိုတော့… CONCEPTUALISM ..ရဲ့ အငွေ့ အသက်တွေ..လွှမ်း ခြုံ ထားတယ်..လို့ …. ပြောရင် ရမယ် ထင်တယ်..နော် ။
( မြန်မာ့ ပန်းချီအနုပညာ(.တချို့ ) မှာတော့… CONCEPTUALISM စိမ့်ဝင် ပျံ့ နှံ့မှု တွေ.. တွေ့ လာရပါတယ် ။ )
ဘာသာစကား / စကားလုံး../ စာသား နဲ့ဖော်ပြရတဲ့စာပေ အနုပညာ မှာ… အဲဒီ စာသား / ဘာသာစကား ..ကိုမှ
( အခြားနူ်ိုင်ငံမှာ ဆို…. ပွက်လော ရိုက်ရုံလောက် သာ…ဖြစ်မယ်.. )
ကျွန်တော်တို့အနုပညာ လောက မှာဆိုရင်…………………
( ကလောင်ဓါး… / ကလောင် တုတ်တွေ.. များ…. ဆွဲ.ကုန်ကြမလားပဲ..။ ဒါက ကျွန်တော့် ပျက်ချော်ချော်…အတွေးပါ ။ )
ဘာ စာသား…/ ဘာ စကားလုံးမှ မပါတဲ့ …
အနုပညာ ပစ္စည်းဆိုတဲ့အရာ ( ဥပမာ… ဓါတ်မီးတစ်လက် ) ကို…
အနုပညာ ပစ္စည်း အဖြစ် လက်ခံနိုင်ဖို့ ….
ကျွန်တော်တို့ ..အတော်လေး…. အားမွေး..ယူရဦးမယ်…ထင်ပါတယ် ။
အနုပညာ ဆိုတာ စိတ်ကူးပဲ…။
ဘာ ပစ္စည်း နဲ့ ..လုပ် လုပ် ရတယ် ။
ဘယ်သူ လုပ် လုပ် ရတယ် ။
ကိုယ်တိုင် မလုပ် လည်း..ရတယ် ။
စိတ်ကူးသာ.. အဓိက ပဲ…ဆိုတဲ့ 
CONCEPTUALISM ကိုင်စွဲသူတွေရဲ့ 
ကျွန်တော့် အနုပညာ အိပ်မက် တွေ ကိ်ု…
စောင်ထူထူ ခြုံ ပေးလိုက်သလိုပါပဲ…။
နွေးထွေး လုံခြုံသွားလိုက်..နဲ့ ပေါ့ဗျာ…။
CONCEPTUALISM ကို.. ကျွန်တော်…မချစ်ဘူး..။
နည်းနည်းတော့.. ကြောက်လန့် မိတယ် ။
အံ့ သြကြီးစွာလည်း..ဖြစ်ရပါတယ် ။
ဒီ CONCEPTUALISM …ကိုတွေ့ ရတာဟာ….
ကိုယ် ကြည့်နေတဲ့TV ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်….
TV မှန်သားပြင် ထဲကနေ….
အပြင်ကို ..ခြေထောက်တစ်ဖက်..ကျော်ထွက်လာတာကို… တွေ့ လိုက်ရသလိုကြီး.. ခံစားမိပါတယ် ။
ဘာသာစကားကို မသုံးပဲ ကဗျာတွေ ရေးချင်နေတယ်..။
ကျွန်တော်က… ဘာသာစကားကိ်ု စွန့်ပယ် ထားလို့ …
အဲဒါ..၀တ္ထု မဟုတ် / ကဗျာ မဟုတ်လို့ ..ပြောချင်လည်း.ပြောကြပေတော့….
သေချာတာတော့… ကျွန်တော် အနုပညာအဖြစ် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ … အရာ ပဲ..ဆိုတာပဲ.. ။
ဘာသာစကားမပါတဲ့ကဗျာကို… အနုပညာပစ္စည်း မဟတ်ုဘူးလို့ .. ပြောရင်လည်း..
လုံးဝ စွန့် ပယ်လို့ .. မရသေး….
မပေါင်းလည်းခက် ပေါင်းလည်း ခက်တဲ့ …. အနေအထားနဲ့ …
ကျွန်တော်… အမြစ်လှန် တွန်းဖယ်ချင်နေတဲ့ … ဘာသာစကားသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ…ထိုင်နေရဆဲ….
ဘာသာစကားဟာ… ကျွန်တော်တို့ ..လူငယ် အနုပညာသမားတွေ ရဲ့ .. လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးရေးဖွဲ့ …ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းရှေ့မှာ..
မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်နဲ့ .. ကာဆီးကာဆီး..ရှ်ိနေဆဲ….
ဘာသာစကားနဲ့ …ပဲ.ရှင်းပြနေရတယ်.. ။
ကျွန်တော် အခု ပြောပြခဲ့သလောက်ဟာ…
ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ခံစားချက် အကုန်တော့မဟြုတ်သေးဘူးဆိုတာ..သေချာတယ်.. ။
ကျွန်တော်…ပြောချင်တဲ့ .. တချို့ စကားတွေကို…
ဘာသာစကားက… ပြ မပေးနိုင်ဘူး… ဦးဆာရေ…
((( ကျွန်တော်.. ဘာသာစကားမသုံးပဲ.. ဖန်တီးထားတဲ့ကဗျာတွေကိုတော့.. နောက်မှ ပဲ.ပြတော့မယ်ဗျာ..။ )))
ဒီလိုပို့စ်​ကိုမှ ကျုပ်​ကိုတိုင်​တည်​ပြီး​ပြောရသလား…​အောက်​မ​လေးလို့သာ​အော်​လိုက်​ချင်​တယ်​ …
​မောင်​ရင့်​ပို့စ်​ကို ကျုပ်​စိတ်​ကြိုက်​မန့်​ရရင်​ ပို့စ်​တစ်​ပုဒ်​စာနီးနီးရှိမှာဆို​တော့….
ပွိုင့်​ ၂၀ နဲ့ ​တော့ လက်​​ညောင်း​ခေါင်းကိုက်​ပြီ..
ဒုက္ခ ဒုက္ခ ဒုက္ခ ….
ပြောပြချင်တာတွေ အများကြီး ရှိနေမှန်း သိတယ်။
ဟိုးးးအစောကြီးကတည်းက ဦးဆာ မှာ အနုပညာနဲ့ပက်သက်တဲ့
ခံစားချက်တွေ ရှိလျက်နဲ့ မပြောဖြစ်သေးတာ ဆိုတာ
ဒါကြောင့် ဦးဆာ လည်း
ပြောစရာ ရှိတာတွေ ပြောပါဦးဗျာ ။ကြားချင်နေတယ် ။
ထမင်းစား သွားမယ်၊ ထမင်းသွား စားမယ်၊ စာလုံးအကုန်အတူတူပဲ ဘာကွာလဲကဲပြော
အမှန်ပြောရရင်ထိပ်ကလေးပဲဖတ်ထားပီးဦးအောင်မန့်သွားတာအေ့။ အောက်ဆက်ဖတ်ဖို့အချိန်မရသေးလို့။ နောက်မှပြန်လာခဲ့မယ်အေ။
တီသဲလည်း ခံစားမှု အားကောင်းသူတစ်ယောက်ဆိုတော့
တီသဲပြောလာမယ့် အနုပညာနဲ့ပက်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း
ထမင်း သွားစားမယ် ဆိုတဲ့ စကား က လွတ်လပ်တယ်။ ထမင်းစား သွားမယ် ဆို တာနှောင်ဖွဲ့ မှုရှိတယ်။ တစ်စုံ တစ်ယောက် က ဖိတ်ထားတာ.ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ သွား စားရမှာ။ စကားလုံးတွေနဲ့ ရန်မဖြစ်ချင်လို့ တော်တော်များများ ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲတွေးပြီး နားလည်လိုက်တယ်။ မြန်မာစာ ။ စကား လှတယ်လို့လည်း မပြောချင်ဘူး။ဖောင်းပွတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြုပြင်ဖို့ မစဉ်းစားချင်ဘူး။ အစားထိုးဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။ ရုံးသုံးနဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်တွေကို အင်းဂလိပ်လို သုံးသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုလူတော်တော်များများလည်း အင်းဂလိပ်လို နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာစာ စကား ကိုယ်ပိုင်ရှိတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် တွေ ကပြောတယ်။” နေ” စာလုံးတွေတဲ့ ။ နေမင်းကြီးကဆင်းသက်လာတဲ့နေမျိုး နေနွယ်တွေကွ။ ဂျီပွန်တွေက အာလျှောက်ရိုက်နေတာ သူရို့ကိုသူတို့ နေမျိုးနွယ်ဆိုပြီး။
123456789 0တွေ ကို ကိုယ်ပိုင် ဂဏန်းနဲ့ ရေးဖို့ ရှိတာ
စောရအိုင် ဆိုတာ ဘုဂို ပေါတွားဒါလဲဂျ
အုပ်ထဲပစ်ထည့်တာ ..မကောင်းသူထိပ်..ကောင်းသူထိပ်ပဲ ….အဟေးဟေး
နာ့ ဒေါ်ဖွားမေ ထိပ်
ဝေါ်အိုင်းနီ ရှလူး ရွှတ် အိုက်ဒါလဲပီးတာပါပဲအေ။ ဒချိဒချိဒချိ
တီအားမို ရွှတ် ရှလူး
စောရအိုင်..စောရ ဆိုတာသူခိုး.စောရအိုင် ဆိုတာ ပွကြီးထိုင်ရာ အရပ် ။တစ်ချိန်လုံး အဲ့လိုမှတ်ထားတာအခုထိ။ ငယ်ငယ်တုန်းက စောရအိုင်ဆိုတဲ့ ရုပ်ပြကာတွန်း ဖတ်ရင်း အဲ့လို မှတ်ထားခဲ့တာ။ ကချင်စကားမှန်းမသိဘူး။
ကချင်စကားမှန်းသိရင် …ကချင်ကောင်နုထွားကြီးကို ပြောခွဲလိုက်တော့လေ…ကျော် ရှက်သွေးဖြာပြမယ်လေ ….အဟိဟိ
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဒညင်းဝက်ရေ ငါအပေါ်ပိုင်းပဲထောက်ခံတယ်အေ။ အောက်ပိုင်းက ဘာသာစကား မပါတဲ့အနုပညာဆိုတာတော့ ငါလဲခုထိခံစားလို့မရသေးဘူးအေ။ ငါကြည့်တယ်။ လိုက်တွေးတယ် သူမရှင်းပြပဲ ငါဘာမှနားမလည်ဘူးအေ။ အဲဒါဘာခေါ်လဲ အင်စတော်လေးရှင်းအတ်လား ဘာလားမေ့ တောင်နေပြီအေ့။ လူဝင်လာတာနဲ့ စာရွက်တွေလုံးခြေထားတာနဲ့ပေါက်တာတွေ၊ ကြိုးတွေနဲ့တုတ်ထားတာတွေ နောက်လှောင်အိမ်ထဲမှာ လူကနေပြီးပါးစပ်ကတခုခု ရွတ်နေ တာတွေ၊ နောက်ရှိသေးတယ်အေ့ အဲဒီလို စကားလုံးမပါတဲ့ အနုပညာတော့ ခုထိခံစားလို့မရသေးဘူး။ အဲဒီအနုပညာကိုရူးသွပ်တဲ့သူတွေကလဲများသားပဲ။ ငါလဲစိတ်တော့ဝင်စားတယ်။ နားလည်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ငါပဲညာဏ်မမှီတာလား မခံစားတတ်တာလားမသိဘူး။ ဒီနေ့ထိနားမလည်သေးဘူးအေ။ ဒါပေမဲ့ ညီးရဲ့ စကားလုံးမပါတဲ့ ကဗျာကိုတော့စိတ်ဝင်စားသားအေ့။ ငါသိတာတော့ အနုပညာမှော်ဆို တာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပဲ။ အဲဒီအနုပညာကိုရူးသွပ်ကြတဲ့ သူတွေကိုချီးကျူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတလော အဲလိုပြပွဲ မျိုးတွေရန်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူးနော်။ ပျောက် ကွယ်သွားတာတော့နှမျော စရာပါ။ ရှိသေးရင်တော့ကြည့် ချင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို အနုပညာပြကွက်တွေကို ဒီမှာ
ကြာရင် ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးမိတယ်။
ဒီမှာ ပွင့်လို့ မရတဲ့ ပန်းတော့
နားလည် ခံစားတတ်ဖို့ 
ဦးဆာကို လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ် ကြံပြီး
ဦးဆာ ကပဲ တိုက် တိုက်သွားတယ်
လူတိုင်း အကြား အမြင်ပေါက်အောင် ကျင့်ကြံကြ။
အာ့ဆို ဘာ ဘာသာစကားမှမလိုတော့ဘူးးး
သူ ဘာလိုလည်း ကိုယ်သိ၊ ကိုယ်ဘာလိုလည်း သူသိ။
ဘိုးဒေါ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြစို့ 